လယ်တီ သပိတ်စခန်းတွင် ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနှင့် သောက်ရေ ခက်ခဲလာ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > လယ်တီ သပိတ်စခန်းတွင် ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနှင့် သောက်ရေ ခက်ခဲလာ
လယ်တီ သပိတ်စခန်းတွင် ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနှင့် သောက်ရေ ခက်ခဲလာ	နေမျိုး	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၈ မိနစ်	နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်စဲရေး ဆန္ဒပြနေသည့် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးခဲ့တော်မူခဲ့ရာ တောင်ပေါ် အမှတ် ၂ သပိတ်စခန်းတွင် ရိက္ခာ၊သောက်သုံးရေနှင့် ဆေးဝါး အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာနေကြောင်း ထိုသပိတ်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦး က ပြောသည်။ “ကျနော်က လယ်တီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ သိမ်တော်ပေါ်မှာပေါ့။ သပိတ်မှောက် အင်အားစုက ၂ဝဝ လောက် ရှိတယ်။ ရိက္ခာနဲ့ သောက်ရေ ကတော့ တော်တော်လိုတယ်။ ပြီးတော့ ဆေးဝါး။ တောင်ပေါ်မှာက ညပိုင်းဆို အေးတယ်။နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး အဖြစ်များနေပါတယ်။ ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ တုတ်ကွေး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ယက်မှ ကိုအောင်စိုး က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ရိက္ခာကို ကားဖြင့်သယ်ယူခွင့်ပြုရန် အာဏာပိုင်များကို တောင်းဆိုထားသော်လည်း ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သာ အနည်းငယ်စီ သယ်ယူ ခွင့်ပြုကြောင်း ၎င်း က ဆက်ပြောသည်။“တော်တော် ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ တောင်ကြားလမ်းတွေမှာ လူနဲ့ သယ်ချင်သယ်မယ်။ တောင်တွေကျော်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲတော့ သယ်ရမှာပေါ့။ သူတို့ကတော့ အထက်က တားလို့ အထက်က ပိတ်လို့ လို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ထိုသပိတ်စခန်းရှိ သပိတ်မှောက်သူများ အင်အားနည်း၊ စိတ်ပျက်ကာ သပိတ်စခန်း ရွှေ့ပြောင်းသွားစေရန် အာဏာပိုင်များက ကြိုးစားနေကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။“ညဘက်ပိုင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေက လာလာပြီး ဆင်းခိုင်းတာ ရှိတယ်။ လုံးဝ အောက် မဆင်းပါဘူး။ အသေခံပြီး ကာကွယ်သွားမှာပါ။ တောင် ၃၃ လုံးမှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်း မှန်သမျှကို အပေါ်သပိတ်စခန်းက ချက်ချင်း သွားတားနိုင်တဲ့အတွက် အောက်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆန္ဒပြပြ သူတို့က ဂရုမစိုက်ဘဲ အပေါ်မှာ ဆက်လုပ်တယ်။ အပေါ်မှာက စက်တွေ လည်တယ်၊ မိုင်းတွေခွဲတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်မှာ သပိတ်စခန်း ဖွင့်လိုက်တာ” ဟု ဆိုသည်။ဒုတိယ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး သိမ်တော်ပေါ်ရှိ သပိတ်စခန်းမှ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြသူများက ကုမ္ပဏီ၏ စက်ယန္တယားများ မောင်းနှင်လည်ပါတ်မှုကို လိုက်လံ တားမြစ်၍ ယခုအခါ ရပ်နားထားကြောင်း သိရသည်။“အခု မမောင်းတော့ပါဘူး။ သူတို့ ရပ်နားထားတာ လေးရက်ပဲ ရှိသေးတယ်” ဟုဆိုသည်။၂ဝ၁၃ မတ်လ ကုန်ပိုင်းအထိ စီမံကိန်းအား ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရန်နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပြီး ချိန်တွင် လွှတ်တော်မှ ထွက်ပေါ်လာမည့် အကောင်းဆုံး အဖြေကို မျှော်လင့်ထားကြောင်း ၎င်း က မဇ္စျိမကို ပြော သည်။သပိတ်မှောက်သူများတွင် သံဃာတော်များ၊ ဒေသခံကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများ၊ အကျိုးဆောင် ကွန်ယက်များ၊ လက်ပံတောင်းတောင် အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေး ကော်မတီ၊ ဗကသ ကျောင်းသားများ ပါဝင်သည်။မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် လိမိတက်နှင့် တရုတ် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီတို့သည် ထိုကြေးနီ စီမံကိန်းအတွက် ဒေသခံ လယ်သမားများ၏ လယ်ယာမြေ ဧက ၇,၈ဝဝ ကျော် သိမ်းပိုက်လိုက်သဖြင့် လယ်သမားများ မကျေနပ်၍ ဇွန်လမှ စတင်ကာ ဆန္ဒပြပွဲများ၊ သပိတ်မှောက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်းဘဲ ဒေသခံများ ကျန်မာရေး ထိခိုက်လာနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း၊ ဘာသာရေးအရ လယ်ဒီ ဆရာတော်ကြီး တရားကျင့်ခဲ့ရာ သိမ်နေရာလည်း ပျောက်ပျက်သွားနိုင်သဖြင့် သာသနာ့အမွေအနှစ်တခု ဖြိုချခံရမည်ကို ဒေသခံပြည်သူများက စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
အရှင် သဇ္ဇန ဆေးရုံမှ ဆင်းမည့်အရေး မြန်မာသံရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်	သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှုတွင်သုံးသည့် လက်နက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒုဝန်ကြီး တုံ့ပြန်	ဦးသိန်းစိန် အိန္ဒိယ မလာမီ နယူးဒေလီရှိ မြန်မာများ ကြိုတင်ဆန္ဒပြ	ဦးသိန်းစိန် မလာမီ နယူးဒေလီမှာ ထိုင်သပိတ် စတင်နေ ရခိုင်ကွန်ယက်များ ညီလာခံက လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချ	အစိုးရ မတောင်းပန်မချင်း မန္တလေးသံဃာများ နေ့စဉ် ဆန္ဒပြမည်	ဒေါ်စု ရပ်တည်ချက် စာရေးဆရာ ကျော်ဝင်း ထောက်ခံအကြံပြု	Who is Online
We have 279 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved